Somlomo oomazibuthe - China Ningbo Sine
USomlomo Magnet Somlomo oomazibuthe nomakhi Sine Magnetic iimagnethi Company Limited Somlomo na igama jikelele umazibuthe abasisigxina ezisetyenziswa kwemibhobho, izithethi head. Oomazibuthe aba iindawo ezingundoqo ezi iintlobo zorhwebo. Inika mhlaba otsalayo esisigxina ukuba lale kwisithethi, ukutshintsha kolwalathiso yangoku ngokukhawuleza kuzisa cone neentshukumo emva naphambili, kwaye ke kuza uphawu umsindo ngaphandle kwisithethi. Umazibuthe asetyenziswe izithethi head ke m ...
Somlomo ngumazibutheManufacturer Sine Magnetic Company Limited
Somlomo oomazibuthe aba igama jikelele umazibuthe abasisigxina ezisetyenziswa kwemibhobho, izithethi head. Oomazibuthe aba iindawo ezingundoqo ezi iintlobo zorhwebo. Inika mhlaba otsalayo esisigxina ukuba lale kwisithethi, ukutshintsha kolwalathiso yangoku ngokukhawuleza kuzisa cone neentshukumo emva naphambili, kwaye ke kuza uphawu umsindo ngaphandle kwisithethi.
Umazibuthe asetyenziswe izithethi head uninzi lwabo iimagnethi neodymium kunye iimagnethi ferrite . Bona ezimise lesangqa okanye disc ezohlukeneyo ngobukhulu. Iimagnethi Ferrite zisetyenziswa ikakhulu ngenxa isiphelo eliphantsi kunye nemibhobho ezitshiphu head. Umgangatho ithoni akulunganga ngokwaneleyo. Iimagnethi isithethi Ferrite zidla amakhonkco enkulu ubukhulu D72xd32x15mm, D60xd24x13mm, D90xd36x17mm, D90xd36x15mm, D36xd18x8mm, D80 x d40 x 10mm, D80x d40 x 15mm, D90 x d50 x 15mm, D110x d60 x 15mm, D110 x d60 x-17mm, D110 x d60 x 18mm kunye njl
Nangona neodymium iimagnethi abasisigxina badla ngakumbi isicelo headphones eliphakathi kwibanga eliphezulu. Umgangatho ithoni sidima, luthambe isandi ilungile, intsebenzo ilizwi kuhle kunye nokubekwa wamasimi isandi ichanile. Kunye nokusebenza ophezulu, ubungakanani kunye nokukhanya iimagnethi ezincinane neodymium nga asuse iimagnethi ezinkulu ferrite supplier enzima kwezinye izicelo kancinci.
ubungakanani ezisetyenziswa ngayo iimagnethi isithethi neodymium na D50x12mm, D50x10mm, D6x1mm, D6x1.5mm, D6x5mm, D6.5 × 1.5mm, D6xd2x1.5mm, D12x1.5mm, D12.5 × 1.2mm njalo njalo. Iindidi zobungakanani ungenziwa ngemfuneko njengoko abathengi kunye neemfuno zabasebenzisi nganye.
Previous: Motor Generator ngumazibuthe
Okulandelayo: Bar Isihluzi Magnetic
Levitating Bluetooth Somlomo